Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Oo Ku Wajahan Dhuusamareeb - Awdinle Online
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa Maanta ku wajahan yihiin Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug.
Safarka Guddoomiye Cumar Finish ayaa xubno hor dhac ah shalay usii diray Dhuusamareeb, kuwaasi oo isugu jiray shaqaale ka tirsan Xafiiskiisa iyo Agaasijmayaal ka mid ah Maamulka Gobolka.
Ujeedka Safar Duqa Muqdisho ayaa waxaa uu yahay sidii uu uga qeyb geli lahaa Shirka Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul Goboleedyada uga furmayo Caasimadda Galmudug.
Dhuusamareeb ayaa waxaa ku sugan Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre iyo dhammaan Madaxda maamul Goboleedyada, iyagoo halkaas uga socda kulamo gaar gaar ah.
Ammaanka guud ee Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug ayaa siweyn loo adkeeyay, isla markaana waxaa sugida amniga iska kaashanaya Ciidanka dowladda Federaalka iyo kuwa Maamulka Galmudug.
Previous articleCiidamada dowladda Libya oo u jiheystay magaalada Sirte
Next articleWasaaradda waxbarashada XFS oo soo xirtay imtixaanka shahaadiga ee dowladda+